Qarax lala eektey Ciidanka Dowlada Somaliya | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Qarax lala eektey Ciidanka Dowlada Somaliya
Qarax lala eektey Ciidanka Dowlada Somaliya
Qarax nuuciisa lagu sheegay inuu ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa ciidamo ka tirsan dowladda waxaa maanta waxaa lagula eegtay wadada xeebta ee u dhexeysa magaalooyinka Marka iyo Muqdisho.
Qaraxan ayaa si gaar ah uga dhacay inta u dhexeysa degaanada Dhanaane iyo Jazeera ee duleedka magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay in uu haleelay mid ka mid ah kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidanka dowladda.
Al Shabaab war ay ku soo qoreen barta ay wararkooda ku faafiyaan ayaa waxa ay ku sheegteen masuuliyadda qaraxan, waxayna tilmaameen in qaraxaasi ay ku dileen Sideed askari, Lix kalena ay ku dhaawaceen.
Sarkaal u hadlay ururka Al Shabaab ayaa sidan yiri “Gaari James ayaan bur burinay, Sideed askarina waan dilnay, Lix kalena waan dhaawacnay”.
Al Shabaab ayaa kordhiyay weerarada qaraxyada loo adeegsado ee ciidanka dowladda ay kula eegtaan degaanada ka tirsan gobolka Shabeellaha hoose, kadib markii maalmihii la soo dhaafay sidan oo kale qaraxyo ula eegteen ciidanka dowladda.